နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူးတွေ ဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကို မဖြစ်မနေသတိထားပါ။ - Barnyar Barnyar
နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူးတွေ ဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကို မဖြစ်မနေသတိထားပါ။
အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်တယ် ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သင့်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်ပါတယ် တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်း အဆိပ်သင့်သလို ဖြစ်ပြီး သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား? မသေနိုင်ဘူးလား? မသေဘူးဆိုရင်ကော ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လို ရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း? ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ဖြေကြတာပေါ့။
အိမ်ကနေ အဝေးရောက်နေတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ ဆိုဒါတွေ၊ ဘီယာဘူးတွေကို သောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲ သောက်ဖြစ်ကြပါသလား? မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာ စိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့ သုတ်မိကြပါသလား? အဲ့လောက်နဲ့ သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေ အကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
သံဘူးတွေ အကုန်လုံးကို စက်ရုံကနေ ထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေ မတက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကို ပို့ဆောင်ပါတယ်။
သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့ အရောင်းစင်တွေမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သော ဖုန်တွေ တက်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ သုံးပြီး တိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ သံဘူးတွေကို ဖွင့်သောက်တော့မယ်ဆိုရင် အခုပြောမယ့် အချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးပါ။
– သံဘူးကို သန့်ရှင်းပေးပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စတိုးဆိုင်မှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘယ်အချိန်ထဲက သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို သင်မသိနိုင်လို့ပါဘဲ။
– Tissue သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခုသိထားရမှာက Tissue က ဖုန်တွေကိုဘဲ ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာပါ။ ပိုးတော့ မသတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
– သံဘူးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အနေအထားနဲ့ ရှိနေသလားဆိုတာကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ သံချေးတက်နေလား? ပျက်စီးနေလား? ပိန်ရှုံ့နေသလား?
– သံဘူးဟာ ဖောင်းကြွနေတယ်ဆိုရင်တော့ မသင့်တင့်တဲ့ ပိုးသတ်နည်းကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ညစ်နွမ်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍များ သံဘူးရဲ့ဘေးမှာ အပေါက်သေးသေးလေးတွေ ရှိနေတာကြောင့်ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ အတွင်းပိုင်းက အရာတွေဟာ အရည်တွေနဲ့ သတ္ထုတွေကို ပေါင်းစပ်သွားစေနိုင်တာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သတ္ထုကသာ သံချေးတက်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီသံချေးဟာ အရည်တွေနဲ့ ရောသွားပြီး မသောက်သုံးသင့်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ အကြံဉာဏ် ရိုးရိုးလေးတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှကို အလုံးစုံ ယုံစရာ မလိုပါဘူး။ အခုအကြောင်းအရာလည်း အပါအဝင်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကကို အဲ့ဒီသံဘူးတွေဟာ စတိုးဆိုင်တွေ၊ စတိုခန်းတွေထဲမှာ ဘယ်လို သိမ်းဆည်းခံထားရသလည်း ဆိုတာကို မသိနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အသုံးမပြုခင်မှာ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပြီးမှ သောက်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ တခြားပုလင်းထဲ (သို့) ခွက်တခုခုထဲကို တဆင့်ပြောင်းလဲပြီးမှ သောက်သုံးတာလည်း အကောင်းဆုံးဘဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
နောကျတခါ အအေးဗူးတှေ ဘီယာဗူးတှေ ဖောကျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြကို မဖွဈမနသေတိထားပါ။
အသကျကို ဉာဏျစောငျ့တယျ ဆိုတဲ့စကားအတိုငျး သငျ့အနနေဲ့ မဖွဈမနေ သိထားသငျ့ပါတယျ တခါတလေ အငျတာနကျသုံးနရေငျးနဲ့ ရူးကွောငျကွောငျသတငျး တှဖေူ့းကွမှာပါ။ ဘယျလိုမြိုးတှလေညျးဆိုတော့ မိသားစု အကုနျလုံး soda ဘူးဖောကျသောကျရငျး အဆိပျသငျ့သလို ဖွဈပွီး သသှေားတယျဆိုတဲ့ သတငျးလိုမြိုးပေါ့။
ဒါပမေယျ့ အခုပွောပွခငျြတာက တကယျသနေိုငျလား? မသနေိုငျဘူးလား? မသဘေူးဆိုရငျကော ဘယျလိုဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈနိုငျလညျး? ဘယျလို ရှောငျကဉျြသငျ့သလညျး? ဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။ တဈခုလောကျ မေးကွညျ့ခငျြပါတယျ။ ရိုးရိုးသားသား ဖွကွေတာပေါ့။
အိမျကနေ အဝေးရောကျနတေဲ့ အခါမြိုးတှမှော သံဘူးနဲ့ လုပျထားတဲ့ အအေးတှေ၊ ဆိုဒါတှေ၊ ဘီယာဘူးတှကေို သောကျတဲ့အခါမှာ ဒီအတိုငျးဖောကျပွီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲ သောကျဖွဈကွပါသလား? မဖောကျသောကျခငျတုနျးက မသနျ့ရှငျးမှာ စိုးလို့ဆိုပွီး မကျြနှာပွငျ တဝိုကျကို Tissue နဲ့ သုတျမိကွပါသလား? အဲ့လောကျနဲ့ သနျ့ရှငျးသှားပွီလို့ ထငျလိုကျပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတှေ အကုနျလုံးအတှကျ အဖွတှေကေိုအောကျမှာ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
သံဘူးတှေ အကုနျလုံးကို စကျရုံကနေ ထုတျလိုကျပွီဆိုကတညျးက ပလတျစတဈတှနေဲ့ ထုတျပိုးထားခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အခွား ဖုနျတှေ အညဈအကွေးတှေ မတကျနိုငျအောငျ ပွုလုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီ အနအေထားအတိုငျးဘဲ စူပါမားကတျတှကေို ပို့ဆောငျပါတယျ။
သံဘူးတှဟော စူပါမားကတျတှရေဲ့ အရောငျးစငျတှမှော ရကျပေါငျးမြားစှာ ရှိနတောကွောငျ့ အခြို့သော ဖုနျတှေ တကျနနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မသောကျခငျမှာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးတာ အကောငျးဆုံးပါဘဲ။
ဒါပမေယျ့ အမှနျတကယျကတော့ သံဘူးတှအေရမျးညဈပတျနလေို့ဆိုပွီး ဆပျပွာမှုနျ့တှေ သုံးပွီး တိုကျခြှတျဆေးကွောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပျတဲ့ နညျးလမျးဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာဘဲဖွဈဖွဈပါ၊ နောကျတဈခါ သံဘူးတှကေို ဖှငျ့သောကျတော့မယျဆိုရငျ အခုပွောမယျ့ အခကျြလေးတှကေို ထညျ့သှငျး စဉျးစားပေးပါ။
– သံဘူးကို သနျ့ရှငျးပေးပါ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ စတိုးဆိုငျမှာ ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ ဘယျအခြိနျထဲက သိမျးထားတယျဆိုတာကို သငျမသိနိုငျလို့ပါဘဲ။
– Tissue သုံးမယျဆိုရငျလညျး တဈခုသိထားရမှာက Tissue က ဖုနျတှကေိုဘဲ ဖယျရှားပေးနိုငျတာပါ။ ပိုးတော့ မသတျပေးနိုငျပါဘူး။
– သံဘူးက ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ အနအေထားနဲ့ ရှိနသေလားဆိုတာကို သခြောစဈဆေးပါ။ သံခြေးတကျနလေား? ပကျြစီးနလေား? ပိနျရှုံ့နသေလား?
– သံဘူးဟာ ဖောငျးကွှနတေယျဆိုရငျတော့ မသငျ့တငျ့တဲ့ ပိုးသတျနညျးကို အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ ညဈနှမျးနမှော ဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍မြား သံဘူးရဲ့ဘေးမှာ အပေါကျသေးသေးလေးတှေ ရှိနတောကွောငျ့ဆိုရငျလညျး အဲ့ဒီလိုဖွဈနိုငျပါတယျ။
– ပကျြစီးနတေယျဆိုရငျတော့ အတှငျးပိုငျးက အရာတှဟော အရညျတှနေဲ့ သတ်ထုတှကေို ပေါငျးစပျသှားစနေိုငျတာကွောငျ့ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ သတ်ထုကသာ သံခြေးတကျနမေယျဆိုရငျ အဲ့ဒီသံခြေးဟာ အရညျတှနေဲ့ ရောသှားပွီး မသောကျသုံးသငျ့တော့ပါဘူး။
နောကျဆုံးပွောပွခငျြတာကတော့ အကွံဉာဏျ ရိုးရိုးလေးတဈခု ပေးခငျြပါတယျ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး အငျတာနကျမှာ ရှာဖှတှေရှေိ့သမြှကို အလုံးစုံ ယုံစရာ မလိုပါဘူး။ အခုအကွောငျးအရာလညျး အပါအဝငျပေါ့။
ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သငျကိုယျတိုငျကကို အဲ့ဒီသံဘူးတှဟော စတိုးဆိုငျတှေ၊ စတိုခနျးတှထေဲမှာ ဘယျလို သိမျးဆညျးခံထားရသလညျး ဆိုတာကို မသိနိုငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့ အသုံးမပွုခငျမှာ သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျပွီးမှ သောကျသုံးတာ အကောငျးဆုံးပါဘဲ။ နောကျတဈနညျးအနနေဲ့ ဆိုရငျတော့ တခွားပုလငျးထဲ (သို့) ခှကျတခုခုထဲကို တဆငျ့ပွောငျးလဲပွီးမှ သောကျသုံးတာလညျး အကောငျးဆုံးဘဲ ဖွဈပါတော့တယျ။
ရုတ်တရက် သေဆုံးနိုင်သော ” သတိထားစရာ အမှတ်တမဲ့ အန္တရာယ် “
ဘဝတခုကို ပွောငျးလဲစသေညျ့ စကားတခှနျး***
This Year : 58248
Total Visit : 58248
Hits Today : 2504
Total Hits : 333384